Are Nweela Ọkara 500 | Martech Zone
Sunday, Eprel 22, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Roger Yu nke USA Today dere otu edemede ụbọchị ole na ole gara aga ụlọ ọrụ na-ahapụ ịde blọgụ:
Site na mmalite nke mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-edochi blọọgụ na ngwaọrụ nimbler chọrọ obere oge na akụrụngwa, dịka Facebook, Tumblr na Twitter.
Isiokwu ahụ dum ziri ezi… mana data nwere ike ịbụ ntakịrị ihe na-ekwuhie nke ụlọ ọrụ niile. Nke mbu, data edeputara sitere na ulo oru ndi Fortune 500 kacha eto eto. Nke a bụ akụkọ ochie nke ihe kpatara nsogbu na mmekọrịta. Ndị ụlọ ọrụ ọ na-ahapụ ịde blọgụ n'ihi na usoro a anaghị enyere ha aka ito ma ọ bụ na ha na-ahapụ ịde blọgụ n'ihi na ha na-etolite?
A ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị isi na-ebipụta ọmarịcha blọọgụ ụlọ ọrụ. Na abughi m ụdị onye ga - asị na ịde blọgụ bụ atụmatụ zuru oke maka azụmaahịa niile. Y’oburu n’inwe akara ngosi di egwu, ndi n’iile esoro ma buru ndi na-eto eto, nke bara uru… kari ileghara njikwa nke kompita. Nke ahụ abụghị ikwu na ụzọ ụlọ ọrụ gị na-etinye dị oke ọnụ dị ka ịde blọgụ ụlọ ọrụ… ị nwere ike iwepụtakwu oge na ego na azụmaahịa ndị ọzọ na mmekọrịta ọha na eze karịa ka ị chere.
Mana ị bụghị otu n'ime ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa na Fortune 500, ị bụ? Lọ ọrụ gị ọ maara nke mba ma ọ bụ nke ụwa? A na-ahụta gị dịka onye ndu echiche na ụlọ ọrụ gị? You bu onye kwesiri ntukwasi obi na ikike nke ndi ulo oru a na-ege? You na achịkwa akara rịzọlt? Have nwere mmefu ego azụmaahịa na nnwere onwe iji wuo usoro ahụ iji ụzọ ndị ọzọ?
Nyere akụrụngwa, agaghị m ede blọgụ maka ụlọ ọrụ m. Enwere m ike itinyekwu ego na mmekọrịta ọha na eze, nkwado, mgbasa ozi na ịkwanye ikwu okwu na mmemme niile na mba ahụ. Ma nke ahụ bụ okomoko nke m na-agaghị akwụli. Gingde blọgụ na-arụ ọrụ nke ọma maka m n'ihi na m nwere ike itinye oge na ike… ma akụ dị oke ọnụ mana nke m na-ahụ mgbe niile iji bulie azụmaahịa m.
Nchegbu m na isiokwu a bụ na, na ilele ya anya mbụ, ụlọ ọrụ nwere ike ile anya n'isiokwu a wee hụ na ọ bụ nnukwu ihe ngọpụ ka ị ghara ile anya ịde blọgụ dịka atụmatụ nwere ike ime. Mkpebi itinye ego na atụmatụ ịde blọgụ dị mgbagwoju anya karịa ileba anya n'ihe Fortune 500 na-eme. Gingde blọgụ is ntinye ego di ogologo nke choro nraranye, ihe ndi ozo na atumatu iji mee ya nke oma.
Ekwenyere m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbapụta na ịde blọgụ n'ihi na ọ naghị eweta nsonaazụ ozugbo ụfọdụ ụlọ ọrụ buru ibu chọrọ. Ọ dịkarịrị mfe ịkwụ ụgwọ iji zụta nlebara anya iji nweta nlebara anya… ajụjụ a abụghị ihe na-arụ ọrụ, ọ bụ ihe gbasara ogologo oge, ego ole na ihe kpatara ị ga - eji tinye usoro otu ọzọ.
Otu ederede ọzọ, ọ bụghị ihe ijuanya nye m na isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị odeakụkọ ọkachamara, ndị editọ na ndị mbipụta ga-ede banyere ihe adịghị mma nke ịde blọgụ. Naanị kwuo!
Tags: ịde blọgụụlọ ọrụ ịde blọgụuba 500ndabara